त्रि.वि. का विद्यार्थीलाई खुसीको खबर, अब घर नजिकैको क्याम्पसबाटै परिक्षा दिन पाइने – Nepal Parikrama
त्रि.वि. का विद्यार्थीलाई खुसीको खबर, अब घर नजिकैको क्याम्पसबाटै परिक्षा दिन पाइने
काठमाडौँ, । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्रिविले विद्यार्थीको पायक पर्ने केन्द्रबाट परीक्षा लिने मोडालिटीमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको हो । कोरोना महामारीका कारण स्थगित स्नातक तह प्रथम वर्षको वार्षिक परीक्षा अनलाइनबाट सम्भव नदेखिएपछि विद्यार्थी जुन जिल्लामा पुगेको छ त्यहीँबाट परीक्षा लिने मोडालिटी बनाइएको हो ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकका प्रकाशित छ ।
Published On: २२ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०६:२२
केही दिन भित्रै परिक्षा तालिका गर्ने तयारीमा त्रि.वि.
फ्रेस फेस: ऐनामा सबै अंग सेक्सी लाग्छ: सुरविना